अमेजनको मिथक | Absolut यात्रा
लोकप्रिय कल्पनामा, अमेजोनहरू बहादुर र क्रूर योद्धाहरू थिए जसले पर्सिया वा पुरातन ग्रीसमा लडेका थिए र उनीहरूको धनुको घोडामा सवार थिए। त्यहाँ उनीहरूको बारेमा धेरै पौराणिक कथा थिए र तिनीहरूमा केही सत्य छ कि भनेर धेरैले सोचे।
यदि तपाईंले पनि आफैंलाई यही प्रश्न सोध्नुभयो भने, अर्को पोस्टमा म अमेजनको मिथकको बारेमा कुरा गर्नेछु, तिनीहरू को हुन्, तिनीहरू कहाँबाट आए र हामी उनीहरूको बारेमा के जान्दछौं।
1 अमेजन को थिए?
2 के अमेजोनहरू अवस्थित थिए?
3 अमेजनको मिथकले के भन्छ?
4 अमेजनले कसको पूजा गर्‍यो?
5 सबैभन्दा प्रसिद्ध अमेजन कुन हो?
अमेजन को थिए?
हामीमा आएको अमेजनको बारेमाको कथा ग्रीक पौराणिक कथासँग मिल्दोजुल्दो छ। उनको अनुसार, अमेजन एक धेरै पुराना योद्धाहरू थिए जसले शासन गर्दथ्यो र महिलाहरु द्वारा बनाईएको थियो।
ग्रीकहरूले उनीहरूलाई बहादुर र आकर्षक तर धेरै खतरनाक र झगडालु पोथी भनेर वर्णन गरे। तिनीहरू एउटा छुट्टै उपनिवेशमा बसोबास गर्थे जसको राजधानी थेमिस्किरा थियो, हेरोडोटसका अनुसार, अब उत्तरी टर्की हुने शहरको सुदृढ शहर।
यस इतिहासकारका अनुसार अमेजनले सिथियावासीहरूसँग सम्पर्क राखेका थिए र उनीहरूसँग प्रेममा पर्नथे तर उनीहरू घरेलु जीवनमा मात्र सीमित हुन चाहँदैनथे, त्यसैले उनीहरूले यूरेशियन मैदानमा एउटा नयाँ समाज बनाए जहाँ उनीहरूले आफ्ना पुर्खाहरूको रीतिथितिलाई निरन्तरता दिए। ।
जहाँसम्म, कथाहरूमा साना परिवर्तनहरू छन् जुन अमेजनहरूका बारेमा बताइएको छ। उदाहरण को लागी, स्ट्र्राबोका अनुसार, वार्षिक रूपमा अमेजनले पुरुष छिमेकीहरूसँग पुनः उत्पादन गर्न र लाइन जारी राख्न राख्दछन्। यदि उनीहरूले एउटी केटीलाई जन्म दिए भने, बच्चा तिनीहरूसँगै एक ठूलो अमेजनको रूपमा बढ्नेछ। अर्कोतर्फ, यदि उनीहरूले बच्चा जन्माए भने, उनीहरूले त्यो मान्छेलाई फिर्ता गरे वा सबैभन्दा नराम्रो अवस्थामा उनीहरूले यसलाई त्यागे वा बलि दिए।
पालाफातो जस्ता लेखकका लागि अमेजोन कहिल्यै अस्तित्वमा थिएनन् तर पुरुषहरू थिए जो महिलाको लागि गलत थिए किनभने उनीहरूले दाह्री कपाल्यो।
के अमेजोनहरू अवस्थित थिए?
एक लामो समय को लागि, अमेजनको मिथक मात्र थियो: एक पौराणिक कथा। यद्यपि, १ 1861१ मा शास्त्रीय विद्वान जोहान जाकोब बचोफेनले एउटा शोध प्रकाशित गरे जसले उनको अस्तित्वको बारेमा शंका उत्पन्न गर्‍यो किनभने उनले पुष्टि गरे कि अमेजन वास्तविक हुन् र मानवता एक वैवाहिक जीवनमा सुरु भयो।
वर्तमानमा, धेरै अनुसन्धानकर्ताहरु तर्क गर्छन् कि अमेजनको मिथ्याको वास्तविक आधार हुन सक्छ। २० औं शताब्दीको अन्तमा नेक्रोपोलिस काजाकिस्तान र रसियाको सिमाना नजिक फेला पर्‍यो जहाँ उनीहरूका हतियारसहित गाडिएका महिलाहरूका चिहानहरू भेटिए।
युद्धमा सायद मरेकी एउटी महिलाको शरीरमा झुकेको तीरको फेला पार्नु एकदमै उल्लेखनीय छ। घोडामा सवार जीवनको कुरा गर्ने किशोरी केटीको झुक्केका खुट्टाका हड्डीहरू पनि।
विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाए कि ती महिलाहरू सिथियावासीहरू थिए, जुन ग्रीक पुरातात्त्विक काल (१ - - XNUMXth शताब्दी ईसापूर्व) को साथ एक हजार बर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको घुमन्ते जाति थिए।। ती टुक्राहरू सहमत छन्: उनीहरूको आप्रवासमा सिथियावासीहरू आजको टर्की पुगे, जहाँ पौराणिक कथाका अनुसार तिनीहरूले ट्रोजन युद्धमा भाग लिने थिए। वास्तवमा यो उल्लेख गरिएको छ कि ग्रीसको नायक अचिलिसले एरेसकी अमेजन रानी छोरी पेन्थेसिलियाको बिरूद्ध ट्रोजन युद्धमा झगडा गरेको थियो।
ट्राईमा घेरा लगाउने क्रममा उनका धेरै कारनामेबाट उनी छुट्टिनु भन्दा पहिले अचिलिसले उनको भालाले छातीमा हिर्काए। उनको मृत्यु भएको देख्दा, अचिलिस उनको सुन्दरताबाट विचलित भइन् र उनलाई स्कामेन्डर नदीको किनारमा गाडिदिए।
विभिन्न नेक्रोपोलिजमा फेला परेका सिथियन महिलाहरूमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी मानिसहरूलाई उनीहरूको हतियारको साथ गाडिन्थ्यो र धेरैलाई युद्धमा चोटपटक लागेको थियो, पुरुषहरूले पनि। यसले संकेत गर्दछ कि उनीहरू मानिससँगै लड्न सक्दछन् र यी संकेतहरूमा अमेजनको दन्त्यकथाको आधार फेला पार्न सकिन्छ।
अमेजनको मिथकले के भन्छ?
अमेजनको दन्त्यकथा सम्भवतः युनानी इतिहासकारहरू जस्तै हेरोडोटसले बनाएका वास्तविकतालाई बढाइचढाइ गरीरहेको छ जुन उत्कृष्ट योद्धाहरूलाई एक निश्चित महाकाव्य दिन चाहन्थ्यो। सबै कुराले संकेत गर्दछ कि यो केवल सिथियन लड़ाकूहरूको एउटा हाइपरबोले थियो, जो शास्त्रीय संसारमा धनुको साथ गोली हान्नको लागि आफ्नो क्षमताको लागि प्रख्यात भयो र घोडा सवारीमा प्रभुत्व जमाउँछ।
शब्द अमेजन ग्रीकबाट आएको हो "amanzwn" जसको अर्थ हो "स्तन नहुनेहरू"। यो अभ्यासले संकेत गर्छ कि अमेजनले केटीहरूसँग जन्ममा गरेको थियो, जसमा एउटा स्तन काटिएको थियो ताकि उनीहरू वयस्क हुँदा उनीहरूले धनु र भालालाई राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्थे।
जब हामी कलाका कार्यहरू हेर्छौं जसमा अमेजन महिलाहरू प्रतिनिधित्व गर्दछन्, हामी यस अभ्यासको संकेतहरू देख्दैनौं किनकि ती दुवै स्तनका साथ देखा पर्दछन् जबकि दाहिने सामान्यतया कभर गरिएको। मूर्तिकलामा, अमेजनलाई ग्रीसहरू विरुद्ध लड्न प्रतिनिधित्व गरिएको थियो वा यी घटनाहरू पछि घाइते गरियो।
अर्कोतर्फ, अमेजनले एफिसस, स्मरना, पाफोस र साइनोपलगायत थुप्रै शहरहरू स्थापना गरेको हो भनियो। ग्रीक पौराणिक कथामा अमेजनको सैन्य आक्रमण धेरै भयो र ती ग्रीकहरूका विरोधी हुन् भनेर प्रतिनिधित्व गर्दछन्।
यी कथाहरूले प्रायः अमेजन रानीहरू र ग्रीसका नायकहरू बीचको झगडालाई वर्णन गर्दछन्, उदाहरणका लागि ट्रोजन युद्धमा अचिलिसको बिरूद्ध पेन्थेसीलियाको लडाई वा पहिलेको बहिनी हिप्पुलिटाको बिरूद्ध हारक्युलिसको द्वंद्व उसको बाह्र कार्यहरूको एउटा भागको रूपमा। ।
यो पनि भनिन्छ कि अमेजनहरू एरेस, युद्धका देवता, र अप्सरा हर्मनीबाट आएका थिए।
अमेजनले कसको पूजा गर्‍यो?
आशा गरे अनुसार अमेजनले आर्टेमिस देवीको पूजा गरे र ईश्वरको पूजा गरेन। उनी अप्सलोको जुम्ल्याहा बहिनी र जियस र लेटोको छोरी र शिकारको देवी, जंगली जनावरहरू, कुमारी, कन्याहरू, जन्महरू थिए। यसबाहेक, उनी महिला बिमारीहरु लाई कम गर्ने को रूप मा श्रेय पाए। दन्त्यकथाका अनुसार आर्टेमिसले यी असाधारण योद्धाहरूको लागि मार्गनिर्देशनको रूपमा काम गरे किनभने तिनीहरूको जीवन शैली।
अमेजोनलाई आर्टेमिसको महान् मन्दिरको निर्माणका लागि जिम्मेवार ठहराइएको थियो, यद्यपि यसको कुनै विश्वसनीय प्रमाण छैन।
सबैभन्दा प्रसिद्ध अमेजन कुन हो?
पेन्टेसिलिया- अमेजन रानी जो ट्रोजन युद्धमा साहसका साथ लडाईमा भाग लिएकी थिइन्। उनी अचिलिसको हातबाट मारिए र एन्टियानारा उनको सिंहासनमा नयाँ राजा भए। भनिन्छ कि उनले ह्याचेटको आविष्कार गरे।
एन्टिआनिरा: यो भनिन्छ कि उसले जन्मेको बेला पुरुषहरूलाई विभाजन गर्ने आदेश दियो किनकि ल the्गडो प्रेमले अझ राम्रो बनायो।
हिप्पोलिटा: पेन्थेसिलियाकी बहिनी। उनीसँग एक जादू बेल्ट थियो जसको शक्तिले उनलाई युद्धको मैदानमा अन्य योद्धाहरू भन्दा फाइदा पुर्‍यायो।
मेलानिपा: Hipólita को बहिनी। भनिन्छ कि हर्क्युलिसले उनलाई अपहरण गर्‍यो र उनको स्वतन्त्रताको बदलामा हिप्पोलिताको जादु बेल्टको माग गरियो।
ओट्रेरा: आरेस देवताका प्रेमी र हिपलिताकी आमा थिइन्।
Myrina: एटलान्टेन्स र गोर्गनहरूको सेनालाई हरायो। उनले लिबियामा शासन पनि गरे।
टेलस्ट्रिया: अमेजन रानी र भनिन्छ कि उनले अलेक्ज्याण्डर दि ग्रेटलाई लोभ्याइन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » अमेजनको मिथक
मोरोक्कोमा गोता लगाउन उत्तम ठाउँहरू